Vuelio: Imithombo yeendaba yakho kunye nePlatform yoBudlelwane kwiQonga | Martech Zone
IVuelio: Iqonga lakho leMithombo yeendaba kunye neFluencer
NgoLwesibini, Septemba 8, 2020 NgoLwesibini, Septemba 8, 2020 Douglas Karr
Ubudlelwane boluntu butshintshe ngokubonakalayo ngokudubula kwamajelo eendaba kwixesha ledijithali. Ayisekho kwanele ukufaka iivenkile ezimbalwa kunye nokudibanisa uluhlu lwenyanga lokukhankanywa kwegama lakho. Namhlanje, ubuchwephesha bobudlelwane boluntu banamhlanje kufuneka bujongane noluhlu olukhulayo lwabaphembeleli kunye nolupapasho, emva koko babonakalise ifuthe abanalo kwimpawu.
Isoftware ye-PR iguqukile kusasazo olulula losasazo lwaya kwiinkqubo zolawulo lobudlelwane banamhlanje ezinokunceda kuphando lobungcali kuluntu, ukufumana, ukunxibelelana, ukuzenzekelayo, kunye nokulinganisa ifuthe abanalo egameni labathengi babo.
IVuelio liqonga lesoftware ye-PR ebandakanya yonke le micimbi yobudlelwane boluntu banamhlanje. Qonda ukuba ngubani obalulekileyo, indlela efanelekileyo yokuzibandakanya emva koko uthumele umxholo, ujonge iziphumo, ulinganise ifuthe losasazo lwentlalo, kwaye uhlalutye ukusebenza kakuhle, konke endaweni enye.
Iimpawu zeVuelio zibandakanya
Isiseko sedatha -Cofa kuluhlu olunamandla lweshishini lwe-PR. Ngokufikelela ngokuthe ngqo ngaphezulu kwesigidi seentatheli kunye nabaphembeleli abavela phantse kumazwe angama-200, unokunxibelelana nabantu ababaluleke kakhulu kwibali lakho, isihloko, okanye umbutho.
Ukubeka iliso kwimidiya -Qonda ukuba ibali lakho lifunyenwe njani ziintatheli kunye nabaphembeleli ngoku mamela ngobuchule kunye nezixhobo zokuvavanya Ukubeka iliso kukuvumela ukuba ugcine iindaba ezaphukileyo kunye nokugubungela usasazo, ushicilelo, kwi-Intanethi nakwimithombo yeendaba zentlalo.
Ukusasazwa kweendaba -Fumana ngokulula ukushicilelwa kwakho kubantu ababalulekileyo. Thumela amabali emultimedia ngokuthe ngqo kwintambo, kwezentlalo, kwiinjini zokukhangela, okanye kwiwebhusayithi yakho. Emva koko landela, uhlalutye, kwaye ufunde kwiziphumo zakho ngexesha lokwenyani.
Uhlalutyo lweendaba -Hlahlela ukuba lifunyenwe njani ibali lakho kwaye ufumane ukuqonda okusebenzayo ukwenza unxibelelwano lwexesha elizayo lusebenze nangcono. Jonga ukuba yeyiphi imiyalezo, umxholo, kunye namajelo asebenzayo (kwaye ngawaphi) kunye neentatheli zakho eziphambili kunye nabaphembeleli. Fumana ukuqonda malunga nendlela yokufikelela ngokufanelekileyo kubaphulaphuli bakho, ukonyusa i-ROI, kunye nokuphucula igama lebrendi.
Igumbi leendaba kwi-Intanethi -Yenza umxholo wakho ufumaneke ngokulula kwiintatheli, kubachaphazelekayo nakwabaphembeleli kwiziko losasazo elikwi-intanethi. Ukupapasha ngokulula ukukhutshwa kweendaba, imifanekiso kunye nolwazi oluxhasayo ngelixa ufikelela kwidatha oyifunayo ukuphucula ukusebenza kwayo yonke into oyenzayo.
I-Canvas -Yila umboniso omhle wabathathi-nxaxheba bakho malunga nendlela ibali lakho elixelwe ngayo ngemizuzwana. Ukuhanjiswa kweendaba zekharityhulam, imisebenzi yezentlalo, ividiyo, kunye nevidiyo zokwenza umboniso omangalisayo wemizuzwana.
Ulawulo lwe-FOI -Ukulawula ngokulula yonke inkqubo yeNkululeko yoLwazi. Gcina umkhondo wexesha elimisiweyo, inkqubo yeenkcukacha-manani, kwaye ngokukhawuleza uvelise iingxelo kwinani nohlobo lwezicelo, njengoko kufunwa ngumthetho we-FOI 2000.
Ulawulo lwabathathi-nxaxheba - Lawula unxibelelwano olubalulekileyo neziko lolawulo loqhakamshelwano olwenziwe lula. Gcina unxibelelwano luhambelana nentatheli kunye nabaphembeleli kwiqela lakho ngokuba ne-hub enye esembindini eneenkcukacha zonke unxibelelwano phakathi kweqela lakho kunye nabachaphazelekayo.
Ulawulo loNxibelelwano lweendaba -Sasaza isicwangciso sakho sonxibelelwano kunye neziko lephulo eliphambili. Isoftware yolawulo lweendaba yeVuelia ikugcinela ixesha ngokwenza kube lula ukucwangcisa, ukwabelana, kunye nokwenza ingxelo ngayo yonke into eyenziwa liqela lakho, ngokulandela umkhondo ngokuzenzekelayo, ukudityaniswa kwe-imeyile, kunye nezixhobo eziphambili zokunika ingxelo kunye nohlalutyo.
Nxibelelana neVuelio yamaxabiso kunye noLwazi
tags: inkululeko yolwaziimithombo yeendabakuhlolwa kweendabaUlawulo lobudlelwane bamajelo eendabaUkuhanjiswa kweendabaukuhanjiswa kweendabakwigumbi leendaba kwi-intanethiiqonga lenqakuiqongausasazo losasazoisoftware yobudlelwane noluntuUlawulo lwabachaphazelekayovuelio
I-MoEngage: Hlaziya, iCandelo, Bandakanya, kwaye wenze ubuTyelelo boHambo-lwaBathengi lokuqala